Akhriso xuquuqda ku jirta Waraaqaha Google > Vielhuber David
Akhriso xuquuqda ku jirta Waraaqaha Google04
Markaad lashaqeyneyso Xaashida Google , ganaax, sharciyada isticmaalaha kusalaysan ee tafatirka waraaqaha shaqada, tiirarka iyo safafka ayaa lagu qeexi karaa xaashiyaha dhexdooda. Nasiib darrose, ma jirto qaab lagu xaddido xuquuqda akhriska. Si kastaba ha noqotee, tani waxay kaa caawin laheyd xaalado badan. Marka waxaad kaliya tusaysaa macaamiishaada tikidhada iyaga khuseeya ama shaqaalaha kaliya mashaariicda ay ku shaqeynayaan.
Hal xal oo macquul ah ayaa ah in la abuuro waxa loogu yeero mastersheet iyo, iyadoo la kaashanayo IMPORTRANGE, si hal meel looga wada akhriyo xogta la soo xulay. Nasiib darrose, taasi waxay ka dhigan tahay shaqo badan oo gacan qabasho ah: abuuridda xaashiyo cusub, u xilsaaridda xuquuqda faylasha, horumarinta iyo hirgelinta qaaciddada IMPORTRANGE, oggolaanshaha oggolaanshaha, dejinta qaabeynta. Haddii qaabdhismeedka ama qaabku is beddelo, tan waa in lagu sameeyaa gacanta dhammaan waraaqaha.
Qoraalka Google Apps ee soo socda ayaa si otomaatig ah u sameeya. Haddii aad ku fuliso habka init () hal mar shaxda masters-ka, dhammaan waraaqaha addoomaha si otomaatig ah ayaa loo abuuray, xuquuqda ayaa loo qoondeeyay oo qaabab iyo qaabeyn ayaa loo dejiyaa. Haddii xogtu isku beddesho xaashida sayidkiisa, waxaa si toos ah loogu muraajinayaa xaashida addoonka. Haddii qaab dhismeedka xaashida sayidku isbeddelo, si fudud u ful init () markale ( waraaqihii hore si otomaatig ah ayaa loo cusbooneysiiyaa).